Psalmen 144 HTB - Nnwom 144 ASCB
1Nkamfoɔ nka Awurade, me Botan,
deɛ ɔkyerɛkyerɛ me nsa akodie,
na ɔkyerɛkyerɛ me nsateaa akodie.
2Ɔyɛ mʼadɔeɛ Onyankopɔn ne mʼaban,
mʼabandenden ne me ɔgyefoɔ,
me kyɛm a mewɔ dwanekɔbea wɔ ne mu;
3Ao Awurade, hwan ne onipa, a wʼani ku ne ho?
Hwan ne onipa ba, a wodwene ne ho yi?
4Onipa te sɛ ahomeɛ;
ne nna te sɛ sunsum a ɛretwam.
5Ao Awurade, firi ɔsoro hɔ na siane bra fam;
fa wo nsa ka mmepɔ, na ɛmfiri wisie.
6Soma anyinam na bɔ atamfoɔ no hwete;
to wo mmemma no ma wɔn nnwane.
7Tene wo nsa firi soro bra fam;
firi nsuo akɛseɛ ho,
firi ananafoɔ nsam,
8wɔn a atorɔ ayɛ wɔn anomu ma,
9Ao Onyankopɔn, mɛto dwom foforɔ ama wo;
mɛto dwom wɔ sankuo a nhoma edu gu soɔ so ama wo,
10ama Ɔbaako a ɔde nkonimdie ma ahemfo,
na ɔgye ne ɔsomfoɔ Dawid firi akofena kɔdiawuo ano.
11Gye me na yi me firi
wɔn a atorɔ ayɛ wɔn anomu ma
12Afei yɛn mmammarima mmeranteberɛ
bɛyɛ sɛ afifideɛ a wɔahwɛ so yie,
na yɛn mmammaa bɛyɛ sɛ adum
a wɔasene de asiesie ahemfie.
13Yɛn asan bɛyɛ ma.
Aduane ahodoɔ biara bɛba mu bi.
Yɛn nnwan bɛdɔɔso ayɛ mpem mpem,
ayɛ mpemdu du wɔ yɛn mfuo so;
14yɛn anantwie bɛtwe nnuane a ɛdɔɔso na emu yɛ duru.
Obiara rentumi nnwiri yɛn afasuo ngu;
na agyaadwotwa remma yɛn mmɔntene so.
Nhyira nka nnipa a wɔn Onyankopɔn ne Awurade.
ASCB : Nnwom 144